ब`ला`त्का`र`बाट जोगिनका लागि ‘रे’प प्रुफ पे’न्टी’, यस्ता छन् बिशेषता, मूल्य कति ?::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
ब`ला`त्का`र`बाट जोगिनका लागि ‘रे’प प्रुफ पे’न्टी’, यस्ता छन् बिशेषता, मूल्य कति ?
एजेन्सी / अहिले नेपालसहित विश्वभर नै ब`ला`त्का`र`का घटना बढिरहेका छन । ब`ला`त्का`र`का घटनामा महिला आफै पनि स्वयंम सुरक्षित हुनुपर्ने भएको छ ।
यस्तै ब`ला`त्का`र`का घटनामा कमी ल्याउनका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतमा एक छात्राले ब`ला`त्का`र-बाट बचाउन सहयोगगर्ने नयाँखालको पे’न्टीको आविष्कार गरेको जनाईएको छ ।
उत्तर प्रदेश घर भएकी १९ वर्षीया सिनु कुमारीले ‘रे’प प्रुफ पे’न्टी’को आविष्कार गरेको खवरले अहिले विश्वभर चर्चा चुलिएको छ । बीएस्सीकी छात्रा रहेकि उनले आफ्नै समाजमा ब`ल`त्का`र`का घटना बढदै गएको खवरले यस्तो खालको पे’न्टीको आविश्कार गर्न सफल भएको जानकारी गराईन ।
उनका अनुसार यो अरु साधारण पे’न्टीभन्दा फरक किसिमको रहेको छ। पे’न्टीमा स्मार्ट लक लगाइएको छ, जुन पा’सवर्डको सहयोगबाटमात्र खुलाउन सकिने छ ।
त्यस्तै, पे’न्टीमा जीपीआरएस प्रविधि जडान गरिएको छ, जसको मद्दतबाट महिलाको उपस्थिति कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिने छ भने पे’न्टीमा जडान गरिएको रेकर्डर डिभाइसको मदतले घटनास्थल वरिपरिको आवाजहरूलाई पनि रेकर्ड गर्न सक्ने समेत जनाईएको छ ।
उत्तर प्रदेशको फरुर्खाबाद जिल्लाको एक साधारण परिवारकी सिनुले दिनहुँ घट्ने ब`ला`त्का`र`का घटनाबाट आजित भएर यस्तो पे’न्टी बनाएको बताएकि छन। उनले बनाएको पे’न्टी ब्लेट फ्रुफ कपडाबाट बनाइएको छ ।
जसलाई च’क्कु वा ब्ले’टले का’ट्न नसकिने तथा न कि यो कपडा ज’लाउन सकिने बताईएको छ । पे’न्टीमा एउटा बिशेष प्रकारको बटन लगाइएको छ जसलाई दबाउनासाथ १०० वा १०९० नं. मा स्वचालित रूपमा फोन जानसक्ने प्रविधीको प्रयोग गरिएको छ । एक महिना लामो प्रयासपछि करिव पाँच लाख भारुको लागतमा यो पे’न्टीको अविष्कार गरिएको हो ।